Xiaomi Mi 10T Series ရဲ့ Specs အပွညျ့အစုံထှကျပျေါလာ.. — Anycall Mobile
Xiaomi Mi 10T Series ရဲ့ Specs အပွညျ့အစုံထှကျပျေါလာ..
Xiaomi အနနေဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ လောကျတုနျးက Mi 10 နဲ့ Mi 10 Pro တို့ကို့ မိတျဆကျခဲ့ ပွီးနောကျမှာ Mi 10 Lite ကို Global ဈေးကှကျအတှကျ မိတျဆကျလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့နောကျထပျ Mi 10 Youth နဲ့ Mi 10 Ultra တို့ကိုတရုတျမှာ မိတျဆကျခဲ့ပါသေးတယျ။ အခုလညျး Xiaomi ဟာ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ကို International ဈေးကှကျမိတျဆကျလာတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဖုနျးနဲ့ပတျသကျပွီး အရငျလကတညျးက သတငျးတှနေဲ့ ပုံတှထှေကျထားပါတယျ။ အခုမှာတော့ ဖုနျးတှရေဲ့ Spces အစုံထှကျလို့လာခဲ့ပါပွီ။
ဒီ Specs အစုံကိုတော့ MuyComputer ဆိုတဲ့ Website က Shared ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဆိုတော့ဖုနျးမှာဘယျလို Specs တှပေါလာမလဲ ??
အရငျက Leaked တှမှောတော့ Xiaomi Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro မှာ 144Hz Refresh Rate ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ OLED Display ပါလာဖို့ရှိနတေယျလို့ဖျောပွထားပမေယျ့အခုမှာတော့ 6.67-inch FHD+ (2340 x 1080 pixels) LCD Display ကိုပဲသုံးပေးလာတော့မယျလို့ သိရပါတယျ။ LCD Display ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ Side-mounted Fingerprint Sensor ကိုပဲသုံးပေးလာနိုငျပါတယျ။
Camera အတှကျ Mi 10T Pro မှာ 108MP Primary Sensor ၊ 20MP Ultra-Wide Lens နဲ့ 12MP Telephoto Lens တို့ပါတဲ့ Triple Camera ကိုတပျဆငျပလောနိုငျပါတယျ။ Mi 10 T မှာတော့ 108MP အစား 64MP Sensor ကိုတပျဆငျပေးလာမှာပါ။ Selfie အတှကျတော့ ဖုနျးနှဈလုံးစလုံးမှာ Punch hole ထဲမှာထညျ့ထားတဲ့ 20MP Selfie ပါလာမှာပါ။
Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ရဲ့ Performance မှာတော့ Flagship Snapdragon 865 Chip နဲ့အားဖွညျ့ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Chip ကိုတော့ 8GB RAM ၊ 265GB Storage နဲ့ တှဲပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ 6/128GB Variant ကိုလညျးရှေးခယျြလို့ရမှာပါ။ Software မှာ Android 10 အပျေါအခွခေံထားတဲ့ MIUI 12 နဲ့ Run ပေးလာမှာဖွဈပွီး Battery အတှကျတော့ 5,000 mAh Battery ပါလာဖို့ရှိနပေါတယျ။
ဒီလအစောပိုငျးလောကျတုနျးက Xiaomi အနနေဲ့ Euro 300 ဝနျးကငျြ 5G ဖုနျးတဈလုံးကို မိတျဆကျလာမယျ့အကွောငျး Social Media တှမှောတငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ကို ဒီဖုနျးအသဈနဲ့အတူတှလေ့ာရနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးတှဟော ဒီလကုနျ ဒါမှမဟုတျ နောကျလလောကျမှာထှကျလာနိုငျခွရှေိပါတယျ။
Xiaomi Mi 10T Series ရဲ့ Specs အပြည့်အစုံထွက်ပေါ်လာ..
Xiaomi အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ လောက်တုန်းက Mi 10 နဲ့ Mi 10 Pro တို့ကို့ မိတ်ဆက်ခဲ့ ပြီးနောက်မှာ Mi 10 Lite ကို Global ဈေးကွက်အတွက် မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ် Mi 10 Youth နဲ့ Mi 10 Ultra တို့ကိုတရုတ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလည်း Xiaomi ဟာ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ကို International ဈေးကွက်မိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်လကတည်းက သတင်းတွေနဲ့ ပုံတွေထွက်ထားပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဖုန်းတွေရဲ့ Spces အစုံထွက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။
ဒီ Specs အစုံကိုတော့ MuyComputer ဆိုတဲ့ Website က Shared ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ဖုန်းမှာဘယ်လို Specs တွေပါလာမလဲ ??
အရင်က Leaked တွေမှာတော့ Xiaomi Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro မှာ 144Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ OLED Display ပါလာဖို့ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမယ့်အခုမှာတော့ 6.67-inch FHD+ (2340 x 1080 pixels) LCD Display ကိုပဲသုံးပေးလာတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ LCD Display ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Side-mounted Fingerprint Sensor ကိုပဲသုံးပေးလာနိုင်ပါတယ်။
Camera အတွက် Mi 10T Pro မှာ 108MP Primary Sensor ၊ 20MP Ultra-Wide Lens နဲ့ 12MP Telephoto Lens တို့ပါတဲ့ Triple Camera ကိုတပ်ဆင်ပေလာနိုင်ပါတယ်။ Mi 10 T မှာတော့ 108MP အစား 64MP Sensor ကိုတပ်ဆင်ပေးလာမှာပါ။ Selfie အတွက်တော့ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးမှာ Punch hole ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ 20MP Selfie ပါလာမှာပါ။
Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ရဲ့ Performance မှာတော့ Flagship Snapdragon 865 Chip နဲ့အားဖြည့်ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Chip ကိုတော့ 8GB RAM ၊ 265GB Storage နဲ့ တွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် 6/128GB Variant ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ Software မှာ Android 10 အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ MIUI 12 နဲ့ Run ပေးလာမှာဖြစ်ပြီး Battery အတွက်တော့ 5,000 mAh Battery ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဒီလအစောပိုင်းလောက်တုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ Euro 300 ဝန်းကျင် 5G ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လာမယ့်အကြောင်း Social Media တွေမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ Mi 10T နဲ့ Mi 10T Pro တို့ကို ဒီဖုန်းအသစ်နဲ့အတူတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေဟာ ဒီလကုန် ဒါမှမဟုတ် နောက်လလောက်မှာထွက်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။